Mid ka mid ah Saraakiisha Sirta Puntland oo Xalay Lagu Dhaawacay Garoowe
Sarkaal ka tirsan ciidamada sirdoonka Puntland iyo qof ka mid ah ilaaladiisa oo la socday ayaa lagu dhaawacay xalay gudaha magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Wasiirada cusub ee uu soo magacaabay Madaxweyne Gaas (Sawirro)
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta ansixiyay Wasiirada cusub ee Maamulka Puntland oo uu dhowaan soo magacaabay Madaxweyne C/wali Maxamed Cali Gaas oo sideedii bishii hore ku guuleystay doorashadii ka dhacday Garowe.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta shirkiis ugu horreeyay la qaatay inta badan wasiirrada cusub ee uu shalay magacaabay. Wasiirrada uu la kulmay madaxweyne Gaas ayaa isugu jiray wasiirro ku xigeenno iyo wasiir-u-dowlayaal.
Madaxweynaha Puntland Dr. C/wali Gaas oo magacaabay Golihiisa Wasiirada cusub (Aqriso Magacyada)
Madaxweynaha Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada cusub oo ka kooban 47 xubnood, oo isugu jira Wasiiro, Wasiir kuxigeeno iyo Wasiir dowlayaal, iyadoo xubnaha uu magacaabay la dhaarin doono maalmaha soo socda.
Diyaar garowga munaasabad lagu caleema saarayo Madaxweynaha Puntland oo ka socota Garowe
Diyaar garowga Munaasabad lagu caleema saarayo Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa ka socota magaalada Garowe, iyadoo tan iyo shalay ay ku qul qulayeen wafuud ka kala socday Maamulada Soomaaliya oo lagu casuumay ka qeyb galka munaasabada caleema saarka.
Madaxweyne C/weli Gaas oo si rasmi ah xilka ula wareegay
Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacday munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen madaxweynaha -dhowaanta la doortay- ee Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynihii hore C/raxmaan Maxamed Faroole.
Sagal Radio Services • News Report • December 22, 2013
Waxaa goor dhaweyd xarunta Puntland ee Garoowe lagu rasaaseeyay mid ka mid ah musharrixinta u tar tamaya xilka madaxweynanimo ee Puntland oo lagu magacaabo C/daahir Maxamed Yuusuf (Yeey).